Yemunharaunda vs Nyika vs Yenyika Dzese Kutsvaga Kugonesa
Mugovera, Gunyana 24, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
Vamwe vedu vatengi vanosundira kumashure patinotaura yemunharaunda yekutsvaga optimization. Sezvo ivo vachizivikanwa sekambani yenyika kana yepasirese, ivo vanotenda kuti kwemunzvimbo yekutsvaga optimization kunokuvadza bhizinesi ravo pane kubatsira. Iyo haisi iyo nyaya zvachose. Muchokwadi, basa redu rakagadzira mhedzisiro inopesana. Kukunda mhedzisiro yekutsvaga kunogona kusimudzira mikana yako yekuverengerwa munyika kana pasirese.
DK New Media inoshanda nevatengi pasi rese. Tine vatengi muNew Zealand, UK uye muFrance. Nekudaro, isu zvakare tine nhamba hombe yevatengi imo muno muIndipolis. Isu tine zvakare yakakura network yeshamwari kuno kuIndipolis. Mhedzisiro yacho ndeyekuti panogara paine chatter pamhepo nezve zvatiri kusvika - saka tinowana kutarisisa kwakawanda uye masimba mazhinji neinjini dzekutsvaga pane mazwi emuno.
Isu hatina kugadzirirwa chete mazwi akadai Indianapolis, tinotsigira zviitiko zvemudunhu, tine kero yedu pazasi pepeji rega rega, uye tine rakasimba bhizinesi mbiri paGoogle… zvese centric kunzvimbo yedu yenzvimbo. Izvo hazvina kutitadzisa isu kutonga pasi rese uye zvepasirese mitsva yekutsvaga, zvakadaro!
Icho chokwadi ndechekuti kuhwina kwekutsvaga kwekumusha kwakavaka chiremera chedu chedome uye kwakatungamira kwatiri kukura mune zvisiri-nzvimbo yekutsvaga mazwi. Tiri munzira yekuhwina mhedzisiro yekutsvaga kweSEO inoenderana, yemagariro yakabatana uye inomiririra zvine chekuita nemakwikwi mazwi ... yedu yemuno optimization haina kutikuvadza kamwechete.
Panzvimbo pekuregeredza kutsvaga kwenzvimbo, ini ndoda kurwisa zvimwe nzvimbo dzedunhu - seChicago, Louisville, Columbus, Cleveland uye Detroit! Kana tikatora vashandi vari kure, tichanyatso shanda kuti mahofisi avo akunde kutsvaga kwenzvimbo. Kune vatengi vedu vane mahofisi ematunhu, isu tashanda navo kuendesa subpages uye subdomains izvo zvakanangwa kunzvimbo yega yega yenharaunda. Kana ivo vane yakanaka yekuvapo dunhu, zvinobatsira yavo yemuno chinzvimbo.
Uye kana ivo vari pachinzvimbo munzvimbo ... yakafara mazwi ekukwezva nyika kana epasirese bhizinesi iri kurudyi kukona!
7 Zvidzidzo Zvakadzidziswa Mukusimudzira Kunyora Kwako
Sep 28, 2011 pa 9: 38 AM
Kugadzirira kwekutsvaga kwemuno zvirokwazvo hazvireve kuti hauchakwanise kukwikwidza padanho repasirese kana repasi rese. Zvinoshamisika kuti mangani mabhizinesi anozeza kunyange kuzadza chimiro chemuno, vachifunga kuti izvo zvinoreva kuti vanozove pigeonholed. Izvo zvinogoneka, uye zvakakurudzirwa, kukwidziridza mamwe mapeji ekutsvaga kwenzvimbo uye kwenyika kuitira kukwezva vese vateereri.